कोरोना (कोभिड १९), जनता र सरकार - Naya Online
मङ्लबार, साउन २०, २०७७ (August 4th, 2020 at 7:23pm ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
डिसेम्बर २०१९ मै चिनको बुहानमा देखा परेर संक्रमण शुरु भएको कोरोना (कोभिड १९) फागुन २०७६ मा नै नेपालमा देखा परेको थियो । चिनले लक डाउन गरेर यसलाई नियन्त्रण त गर्यो तर यो अन्य देशहरूमा माहामारीको रूपमा फैलियो । अन्य देशमा फैलिरहदा भने नेपालमा यो आई पुगेकै थिएन र फैलिएको थिएन । यसर्थ, यसबाट नेपाली जनतालाई बचाउन र यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई प्रशस्त मौका तथा समय थियो । तर नेपाल सरकारले यसको लागी तत्काल कदम नचालेर प्रधानमन्त्रि ओलीको स्वास्थ्यमा केन्द्रित रह्यो र तुरुन्त लकडाउन गर्न केपी ओलीलाई अस्पतालबाट बाहिर आउदासम्म पर्खि बस्यो । अन्तत ओली चैत्रको पहिलो हप्तामा अस्पतालबाट बाहिर आए र लकडाउनको घोषणा त गरे तर त्यो ढिलो भईसकेको थियो ।
सरकार भनेको व्यक्ति होईन त्यो त संस्था हो राज्यसत्ताको मुख्यनायक हो । सरकारले जनताको स्वास्थ्यको लागि कोरोनाको व्यवस्थापन गर्न तत्काल सजग भएको देखिएन । लकडाउन भनेको कोरोनालाई फैलन नदिई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तयारीको लागी थियो । सरकारले कोरोना व्यवस्थापनको लागि लकडाउन त गर्यो तर त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनभन्दा अन्य कुरामा ध्यान दियो । सरकारले हवाई उडानबाट आउनेहरूलाई विमानस्थलबाट सोझै क्वारेन्टाईनमा लानु पर्दथियो तर त्यो गरेन । हवाई उडान पनि ढिलो गरि बन्द गर्यो । दोस्रो, नेपाल सिमा नाकाहरूलाई नियन्त्रण गरिनु पर्दथियो र खास–खास नाका खुला गरिनु पर्दथियो । भारतबाट आउनेहरूलाई सोझै क्वारेनटाईनमा लैजान सिमाका नाकाहरूमा व्यापक क्वारेन्टाईन स्थापना गरिनु पर्दथियो र त्यहाँ १४ दिन राखेर कोरोना जाच गरि आफ्नो गाउ ठाउँमा पठाउनु पर्दथियो । सरकारले मजदुरहरू खासगरि सहरी मजदुरहरूलाई १४ दिनसम्मको खाने बस्ने व्यवस्था गरेर कोरोना जाच गरि त्यसपछि काम गर्न खुला गर्नु पर्दथियो । यसो गरिएको भए देश भित्रका जनता सुरक्षित हुन्थे र देश भित्र लगातार लकडाउन गर्नै पर्दैनथियो भने दशौ अरव रूपैया खर्च पनि गर्न पर्दैनथियो ।
तर सरकार यता पट्टी लागेन बरु कोरोना जाच गर्ने किट्स तथा औजारहरूमा कमिसन खान यो या त्यो एजेण्टबाट सामान झिकाउने भन्नेतिर लाग्यो । नेपाल भारत सिमा नाका सबै बन्द गर्यो भने भारततिर आउनेहरूलाई सिमा नाकामा नारा जुलुस नै गर्नु पर्ने अवस्था आयो । यसको परिणाम मानिसहरू नाकाबाट नआई खुला सिमाको विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाल भित्र पसे र गाउँगाउँमा कोरोना सल्किन पुग्यो । कोरोनाको कहर चलेको समयमा सरकार दल टुक्र्याउने खेलतिर लाग्यो र दल टुक्र्याउने अध्यादेश ल्यायो । सरकार दल भित्रैका गुण्डा भनेर चिनीएका र पुर्व प्रहरी प्रमुखलाई प्रयोग गरेर अर्को दलका नेता तथा सांसदहरूलाई अपहरण गर्ने कामतिर लाग्यो । यि सबै हर्कतहरूले कोरोना भुसको आगो झै भित्र भित्रै झन फैलियो ।
कोरोना नियन्त्रणको व्यवस्थापन
कोरोनाको औषधी नभएकोले यसलाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्न कोरोनालाई देश भित्र, क्षेत्रभित्र, गाउँभित्र र घरभित्र छिर्न नदिनु र कोरोना भए नभएको जाच गरेर निश्चित गर्नु नै यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन थियो । यस्तो काममा सरकार शुरुमै चुक्यो र पछिल्लो समयमा अलि अलि भए पनि केही यस्ता काम भने भए तर त्यो धेरै ढिला भईसकेको थियो । अझ सरकारले फुर्ति लगाएर सरकारकै प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण अहिले सम्म ४–५ जना कोरोना संक्रमित भएको र रोक्न सकिएको भनेर ठुलै गफ चुट्यो तर यो उस्को व्यवस्थापनका कारणले नभएर जाँच नगरिएको र नदेखिएको कारणले भएको थियो । सरकारको व्यवस्थापन त हवाईजहाजबाट आएका मानिसहरू को को आए र कता–कता गए भन्ने सम्म रिपोर्ट लिन सकेन । २÷४ जनाको केस हिस्ट्री लिएर चित्त बुझायो ।
कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारले राम्रै काम गर्यो तर उसले आफ्नै कार्यालय वरिपरि र आसपास मात्र क्वारेनटाईन बनायो । सिमाना नजिक र नेपाल–भारत सिमा नाकामा क्वारेन्टाईनका साथै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्न असफल रह्यो । हुन त यो संघीय सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारणले भएको होला ।
‘केटाकेटीलाई गुलेली खेलाउन दियो मट्याङग्राको सत्यानाश’ भन्ने हाम्रो गाउँघरमा प्रचलित उखान छ । सरकारमा बस्नेहरू कोरोनालगायत धेरै सवालहरूमा केटाकेटी जस्तो देखियो । केटाकेटीले गुलेली भेट्टाए हान्नुपर्ने ठाउँमा नहानेर जता पायो त्यता हानेर मट्याङग्रा सकाउछन् त्यस्तै सरकारमा बस्नेहरूले मट्याङग्रा मात्र सिध्याए । तर कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेनन् । अहिले कोरोना झन–झन फैलिरहेको छ । नेपाली जनताको भाग्य भनौ कोरोनाको संक्रमण धेरै भए पनि मर्नेको संख्या अनुपातमा कम छ । यसमा पनि सरकारले बेसार र पानी खान सिकाएकै कारण मर्नेको संख्या कम भएको हो भनेर भनि दिन बेर लगाउदैन । यो त केटाकेटी जस्तै छ । केटाकेटी जस्तालाई सरकारमा पुर्याउने नेपाली जनतालाई पनि धन्यवाद नै दिनु पर्छ ।
जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ?
कोरोना व्यापकरूपमा फैलियो भनेर यहि साउन १५ देखि सरकारले फेरी कडाई शुरु गरेको छ । यतिखेर पुन लकडाउन र निशेधाज्ञा नै जारी गर्ने कुराहरू आईरहेको छ । कोरोनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरी लकडाउन गरेर आफ्नै दल भित्र लडाई गरिरहने कार्य भईरहेकोले अबको लकडाउनले चाही गर्छ के भन्ने प्रश्न उठ्छ । फेरि देशले कोरोना नियन्त्रणको कार्यमा काम नगर्ने र आन्तरिक लडाई गर्ने लकडाउन थेक्न सक्दैन । अर्थतन्त्र अहिल्यै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । जनताको हालत यस्तो दयनीय भएको छ । व्यापार व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसको जिम्मा कस्ले लिन्छ ? शुरुमा सरकारको व्यवस्थापनले गर्दा ४–५ जना संक्रमित भएकोमै सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्यो भन्ने सरकार र सरकारमा मन्त्रिहरूले अहिल्यै २०,०८६ संक्रमित पुग्नु, दैनिक हजारौ संक्रमित बढ्नु र ५८ मर्नु सरकारकै प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रणका उपायले हो भनेर किन भनिरहेका छैनन् । यो त सिधै प्रधानमन्त्रि ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको गलत हर्कतका कारण भएकोले जनताले यिनलाई सजाय गर्नु पर्ने हदसम्मको अपराध हो ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली अलि स्याल बाठो छन् । ‘स्याल बाठो भयो भने शहर छिर्छ’ भन्ने एउटा उखान छ । एकछिन झुक्याउन सफल भए पनि त्यो दिर्घकालका लागी हुदैन । उनले यस वीचमा जनताको मन मस्तिष्क डाईभर्ट गर्न कथित राष्ट्रवाद, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धको चुच्चे नक्सा, नेपाली आयोध्याकाण्ड जस्ता कुराहरू ल्याए । जनतालाई केहीछिन भए पनि उपनिबेशकारी अवसरवादी अभिजातिय नश्लिय राष्ट्रवादले गिजोल्न सफल भए । जति झुक्याए पनि अखिर स्याललाई शहरमा यताबाट पनि कुटछन् उताबाट पनि कुट्छन, अगाडिबाट पनि कुट्छन् र पछाडीबाट पनि कुट्छन् अनि दुःखान्त मरण हुन्छ ।